२८ माघ - नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई वासिंगटनमा स्वागत र सम्मान दिएर पठाएको केही सातापछि नै काठमाडौंको सत्तारुढ दलबाट वाशिंगटनले यस्तो विज्ञप्तीको अपेक्षा स्वाभाविक रुपमा गरेको थिएन।
८ माघ - तिब्बतसँग युद्धका लागि हतियार किन्न चन्द्रशम्शेरले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्कालिन प्रधानसेनापति भीमशम्शेरलाई दिए। तिब्बतसँग युद्ध टरेपछि हतियार किन्नु परेन तर त्यो पैसा भीमशम्शेरले राज्यकोषमा फिर्ता गरेनन्। तिनै भीम चन्द्रशम्शेरपछि देशको प्रधानमन्त्री बने।
२० पुस - ‘के नेकपाले अहिले अंगिकार गरेकै सामाजिक रुपान्तरणको मोडेल कांग्रेसको मोडेल हो? हो भने यसको स्वामित्व दाबी गर्न किन सक्दैन कांग्रेस? हैन भने कांग्रेसको बैकल्पिक मोडेल के हो?’
१८ पुस - डा’साब तपाईं यतिवेला नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। र, म पनि पत्रकार छैन। भन्नुस्, नेपालमा कुन तहसम्मको बाह्य हस्तक्षेप हुँदोरहेछ। भट्टराईले जुन उदाहरण दिएर हस्तक्षेपको नमुना सुनाए, म अवाक भएँ।
१६ पुस - इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिताबाट दक्षिण एशियामा नेपालको स्वतन्त्र भूमिका अरु उजागर हुनेछ, जसका कारण चीन भन्दा धेरै भारत चिढिनेछ।
१२ पुस - ‘इन्द्रबहादुर राईको नाम भारतीय साहित्य जगतमा प्रख्यात हुँदाहुँदै उनको ‘आज रमिता छ’ पुस्तक भारत वा त्यसबाहिर धेरैले पढ्न पाएनन्। मैले यो पुस्तक अनुवाद गरेर एउटा भारतीय लेखकलाई भारतीयसमक्ष चिनाइदिने काम गरेँ भन्ने लाग्छ।’
१० पुस - म पहिला एकफिट होचो राष्ट्रवादी थिएँ। मैले आफ्नो जीवनका अनुभवबाट सिक्दै जाँदा अहिले मलाई के लाग्न थाल्यो भने म चाहिँ अब राष्ट्रवादी रहिनँ। जे जे धर्मको आधारमा कोही राष्ट्रवादी हुन्छ, म त्यस्तो हुन सकिनँ।
डा. केशव बस्याल
३ पुस - नेपालीहरुको आप्रवासनकोे इतिहास वर्तमान नेपाल निर्माणको शुरुवातदेखि नै भएको पाइन्छ।
१ पुस - पुराना र युवा पुस्ताबीच सन्तुलन कायम राख्दै गान्धीले राजस्थामा र मध्यप्रदेश दुबैमा पुराना नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा छनोट गरेर लोकसभा निर्वाचनको आफ्नो रणनीतिको संकेत दिएका छन्।
हवाई यात्रुको पक्षमा नयाँ कोशेढुंगा
१ पुस - नेपालमा शनिबारदेखि मोन्ट्रियल महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ। हवाई उड्डयन क्षेत्रका नयाँ अविष्कारलाई सम्बोधन गर्ने यो सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा हुने फाइदा के हो ?
२१ मंसिर - बिसं २०२० को दशकदेखि निर्माण सुरु भएको कोदारी राजमार्गले फेरि नेपाल–तिब्बत व्यापारलाई जीवन्तता दिन थालेको हो। बिआरआई परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने नेपाल–चीन रेलमार्गले नेपाल-तिब्बत (चीन) व्यापारलाई अरु उत्कर्षमा पुर्‍याउनेछ।
२० मंसिर - तातो घाममा पीना सुक्दै गरेको अहिलेको अवस्थामा कागहरु टाढाबाट कराउँदै गर्दा केही अन्यौलमा पर्न सक्छन्। तर नयाँ बाटो हिड्दा कयौंलाई ‘ऐठन’ हुन्छ भने पनि सरकार आत्तिनु हुँदैन।
१५ मंसिर - बेइजिङमा चिनियाँ रक्षा प्रवक्ता रन क्वोछियाङले पत्रकार सम्मेलन गरेर चीन–भारत संयुक्त सैनिक अभ्यासको नाम ‘हातमा हात’ भन्ने रहेको बताए।
११ मंसिर - ताइवान फिर्ता लिने चिनियाँ योजनालाई व्यापार युद्धले पछि सारिदिएको छ। तर राजनीतिक र व्यक्तिगत कारणले गर्दा आफू निवृत्त हुनुअघि नै राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो द्वीप फिर्ता लिने सम्भावना बढी छ।
८ मंसिर - अमेरिकी सार्वजनिक पदमा जनताको मतले जितेर यो स्तरमा पुग्ने भण्डारी नेपाली मुलका पहिलो व्यक्ति हुन्। आँटे गरे जीत्न के सकिंदैन भन्ने कुराको उदाहरण हो यो।
२५ कार्तिक - डिसेम्बर ११ मा सार्वजनिक हुने पाँच वटा प्रदेशको चुनाव परिणामसँगै भारतका विपक्षी र सत्तारुढ पार्टीको चुनावी रणनीति अझै प्रखर हुनेछ, जसले लोकसभा चुनावको परिणामको छनक दिनेछ।
२४ कार्तिक - विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको नयाँ नीति निर्माण गर्नेतर्फ भर्खरै पहल भएको छ। तर यस्तो अंशगत प्रयासबाट मात्रै अहिले यो क्षेत्रले सामना गर्नु परेका समस्या समाधान गर्न संभव छैन।
२० कार्तिक - मानिसको जीवन गोरुजस्तै, यन्त्रजस्तै भएर जोतिनुमात्र होइन। रमाइलो पनि चाहिन्छ। वर्षदिनमा आउने मुख्य चाड दशैंं र तिहारमा रमाइलो गरी, सबैसँग मिलेर, अहंकार त्यागेर मनाउनुपर्छ।
२९ असोज - जनताले फालेको राजतन्त्रलाई यति सुविस्ता, यति सम्मानका साथ दुनियाँमा कहीँपनि बस्न दिइएको छैन, बस्न दिइएको हुँदैन। तर नेपालमा हामीले अत्यन्त उदार, फराकिलो लोकतन्त्र ल्याएका छौँ र अभ्यास गरेका छौँ, जहाँ संघर्ष गरेर फालिएको राजतन्त्रलाई सम्मानसाथ व्यवहार गरेका छौँ।
२२ असोज - शक्तिशाली सरकारले ८ महिना बिताइसक्दा समेत एउटा पनि भ्रष्टाचारी भेट्टाउँदैन। तर जन्ममिति ढाँटेर सम्बैधानिक निकायको उच्च तहमा पुगेकै आधारमा तक्माले विभूषित गर्छ।